Kay natory izy fa tsy maty izany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny alahady 19 mey 2014 teo no voalaza fa maty ity ramatoa mpitarika vondrom-pivavahana ity. Mitoetra ao Antananarivo ao. Talohan’ny nahafatesany dia efa nametraka fara hafatra amin’ireo olona taritiny izy fa ho faty ary hitsangana afaka hateloana. Fantatry ny kristianina tsara izany tantara izany. Kristy irery no mahavita izany. Fa avelantsika aloha izany fanazavana ara-teolojika izany fa tsy eto amin’ity ny sehatra hivalamparantsika ny amin’izany. Isan’ny hafatra napetrany koa raha ny hita amin’ny fampitam-baovao dia rehefa maty izy dia havadibadika isaky ora roa eo ho eo. Moa va tsy tahaka ilay fanao amin’ny olona mamo izany hafatra izany ? Ndao ho lalovana ihany koa io lafiny io fa tsy atao ho olana goavana na dia manitikitika tokoa aza.
Tsy maseran’ny EKAR
Mba tsy hanao hitsin-dalana hilazana fa tsy marina ilay vaovao re dia nihodina nanontany ny manodidina ny tena.
Ny fanontaniana voalohany napetraka dia hoe masera ao amin’ny Fiangonana katolika ve ity “Sœur Fabiola” ity ? Ny valiny dia mazava : “Tsia”. Nametrahana fanontaniana izay mpiandraikitra eo anivon’ny EKAR ary samy nilaza fa tsy masera eo amin’ny EKAR io ramatoa io. Tsy masera eo anivon’ny EKAR izany i “Sœur Fabiola”. Ny anarana tokoa tanim-boanjo. Tsy afaka hanakana olona hampiasa ny anarana sœur na masera ny EKAR. Ny kristianina no manana adidy hiroso amin’ny fanazavana ny sain’ireo mpiara-belona. Ny ankamaroan’ny olona koa anie tsy atoro fa mahalala ary avy hatrany dia mahay manavaka e !
Maty aho, nefa tsy maty
Mazava ny amin’iny resaka “sœur” tsy masera iny izay mety nanjavozavo tao antsain’ny olona sasany. Fa eto amin’ny lafiny antsoina hoe maty indray ary no ndeha hifampitafana e.
“Ho anay dokotera dia tsotra ny antsoina hoe maty” hoy dr Fidy Bariniaina. “Raha tsorina dia rehefa tsy mitempo intsony ny fo no hambara fa maty” hoy izy. Io no famaritana tsotra azon’ny dokotera eny rehetra eny atao. Raha toa kosa ka eny amin’ny toeram-pitsaboana (hopitaly, klinika…) izay misy fitaovana fandrefesana ny fiasan’ny ati-doha (EEG Electro-encephalogramme) dia rehefa tsy mihetsika intsony ny fitaovana na ilay antsoina hoe EEG plat no ambara koa fa maty ny olona iray. “Ny fahatahorana ny handevim-belona no hanongotsongoana ny maty” hoy ny fomba fiteny malagasy. Nanana ny fahendrena tokoa ny teo aloha raha niteny izany. Raha mbola mandre marary ny olona iray dia mbola misy aina izany ao. Fomba iray handrefesana ny mbola miasa ny nerf na tsia io fanongoana io. Tsy ny dokotera rehetra koa no manana io fandrefesana ny fiasan’ny ati-doha io ka mionona amin’ilay fitsapana ny fitempon’ny fo ny dokotera. Ny dokotera ihany no manana alalana hanambara fa maty ny olona iray.
Marihina fa misy olona ao anatin’ny “coma profond” aman-taonany maro fa tsy mbola maty akory izy na izany. Ho an’ny olona tsotra dia tahaka ny efa maty ny olona anatin’ny coma profond. Mila mitsapa lalina vao hita fa mbola misy aina ao amin’ilay olona. Fandre ny voambolana hoe “expérience mort imminente”. Io ve ilay hoe ambavahaona ? “Ny tenako dia efa niaina izany hoe ho faty izany” hoy mompera Guillaume. Efa hitako nilaozako ny vatako dia hoy aho hoe : “izay izany”. “Kanefa dia niverina tao amin’ny vatako indray aho” hoy izy. Na teo aza izany expérience izany dia tsy afaka hilaza mihitsy aho fa nitsangana tamin’ny maty satria mbola tsy maty aho raha tsorintsika etoana ny fanazavany.
Fitsanganana amin’ny maty
Tsy voalohany ny fisian’ny mpitarika vondrom-pivavahana iray nilaza fa hitsangana amin’ny maty afaka hateloana. Nisy ny tany Mahajanga ary tsy nitsangana kosa izy fa tena maty sy nalevina. Mandeha amin’izay ny resabe fa misy fanafody hohanina ka izay olona mihinana izany fanafody izany dia tahaka ny maty mandritra ny fotoana haharetan’ny fatra (dose) nohanin’ilay olona. Mandeha ny resabe fa ireo sekta ao Afrika Atsimo no tena mampiasa io fomba io. Natao ihany ny fikarohana eo amin’ny internety fa mbola tsy nahitana ny vaovao momba izany hatreto. Ny dokotera izany nanontaniana koa samy milaza fa sarotra inoana ihany izany na dia… eo aza ny fivoaran’ny fikarohana ara-tsiansa.
Ny ankamaroan’ny olona nanontaniana dia nilaza fa ny vaovao tahaka izao no manome lanja ny fisian’i Md Tomà izay tsy nino raha tsy nahita. Ny mampalahelo koa dia ny fanjakana dia tsy mampiseho ny maha raiamandreny azy. Raha vao nisy tranga vaovao mitovy amin’ilay tany Mahajanga dia tokony avy hatrany dia nandray fanapahan-kevitra ny Fanjakana mijery akaiky sao misy fanangolena ao. Ireo mpanara-dia an’io ramatoa io izao aoriana kely ao dia hanaiky izay baiko omen’io “nitsangana tamin’ny maty” io. Loza ! Mety ho tsy ny ampahafolon-karena intsony no homena fa ny harena manontolo mihitsy kanefa olona natory fotsiny no nitsaohana !